Maalinta Koowaad Dhalashiisa Cake Cake Tutorial + Video - Sugar Geek Show - Keega
Burburi Cunto karis
Keeg la jajabiyey waa keeg yar oo si fudud loogu qurxiyey socod baradka, caadi ahaan dhalashadooda koowaad! Uma baahnid inaad noqotid xirfadle qurxinta keegga si aad u sameysid keeg jajab qurux badan! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xoogaa keega, kareemka la kariyey iyo ilaa 60 daqiiqo! Waad sameyn kartaa tan!
Si aad u sameysid keegaaga burbursan waxaad u baahan tahay oo dhan waa dhowr keeg oo keega yar, waxaan isticmaalayaa labo 6 ″ x 2 ″ Faantada Fat Daddio. A 6 board loox keega wareega ah ama saxan fidsan si aad ugu dul dhisatid keegaaga, spatula ama qaaddo ku faafisa dhaxanta, iyo wax aad ku garaacayso haddii aad rabto naqshad.
Waxaan isticmaalayaa caarada dhuumaha 1M iyo boorso tuubbo la tuuro. Ujawaab ayaa waxyar ka fududayn doonta qabowga laakiin uma baahna 100%! Waxa kale oo aan haystaa xashiishka kursiga keydka oo aan ka helay bakhaarka doollarka oo runti aad u fiican u jilcinta dhinacyada keega ee jaakadda jajabka ah.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka barato sida loo qurxiyo keeggaaga ugu horreeya, waxaan haystaa a cashar bilaash ah bilawga halkan .
Waxaad ka heli kartaa weel keeg ah iyo alaabtaada oo dhan dukaamada cuntada ugu badan ee ku yaal dariiqa wax lagu dubo ama dukaamada farsamada gacanta sida Michaels ama Joann Fabric ee keega qurxinta marinka.
Waa inaad ku haysataa wax kasta oo aad horey ugu baahan tahay golahaaga marka laga reebo kuwa soo socda.
Caano subag : Ka dhigaysa keega mid jilicsan. Majiro caano? Waxaad ku samayn kartaa bedel kuu gaar ah halkan.
Subagga aan cusbada lahayn : Subagga cusbada leh waxaa ku jira milix aad u badan wuxuuna ka dhigi doonaa keegaaga milix leh sidaa darteed kuwa wax dubaya waxay inta badan isticmaalaan subag aan cusbayn oo waxay ku darayaan xaddiga milixda ee loo baahan yahay.
Xasiliyaha Kareemka Oetker Darwiish : Wuxuu ka caawiyaa kareemka la karbaashay inuu ku ekaado qaab cimilada diiran laakiin looma baahna. Waad arki kartaa dhammaan siyaabooyinkeyga kale xasili kareemka la kariyey on boostadan.
Sharoobada Shukulaatada : Waxaan rabay inaan dhadhammo kareemkeyga karbaashka ah sidaa darteed wuxuu u dhadhamiyey sida caanaha shukulaatada laakiin taasi waa ikhtiyaari!
Waa maxay dhadhanka ay tahay in keega la burburiyo uu noqdo?
Burburi keeggu wuxuu noqon karaa dhadhan kasta oo aad rabto laakiin sida caadiga ah, socod baradka looma baran cuntooyinka runtii dhadhankoodu aad u daran yahay sidaa darteed waalidiinta badankood waxay doortaan dhadhan fudud sida vanilj ama shukulaatada. Cuntadani, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo keeg vanilj macaan (laga bilaabo xoq) iyo sida badhkeed loogu beddelo shukulaatada!
Sababta aan u go'aansaday in aan sameeyo keega burburin kara vanilj badhkeed iyo badh shukulaatada ayaa ah aniga oo aan hubin dhadhanka wiilkayga Ezra uu jeclaan lahaa kan ugu wanaagsan, sidaa darteed waxaan go'aansaday in aan siiyo xulashooyin! Haddii aad rabto inaad sameyso keegaaga burbursan oo dhan vanilj, ama dhammaan shukulaatada, taasi waa gebi ahaanba adiga!
Waa maxay qaboojiyaha ugu fiican ee keega burbursan?
Waxaa jira noocyo badan oo dhaxan ah oo aad u adeegsan karto keega ugu horreeya ee cunuggaaga burburin kara, sida buttercream fudud ama ganache shukulaatada. Laakiin waxaan u maleynayaa in barafka ugu fiican ee la isticmaalo uu yahay kareem la kariyay oo aan aad u macaaneyn. Sababta aan u jeclahay isticmaalka kareemka la kariyey ayaa ah in dhadhanka uu aad ugu eg yahay caano uu ilmahaagu horeyba ugu bartay cabista. Waxaan ku daray xoogaa yar oo shukulaatada kareemkeyga karbaashka ah laakiin taasi gabi ahaanba waa ikhtiyaari.
Iyo haa, waad midabayn kartaa kareemka la kariyey haddii aad rabto. Kaliya ku dar dhibic dareeraha midabaynta dareeraha ah kareemka la dubay oo ay weheliso sonkorta budada ah iyo soosaarida vanilj.
Waxa ugu weyn ee aad rabto inaad ka taxaddarto waa karbaash badan. Kareemka la kariyey wuxuu ka bilaabmaa dareeraha ilaa subagga waqti aan yareyn sidaa darteed waligaa ha ka fogaan inta uu karbaashayo. Way kafiican tahay karbaashida iyo joojinta barta ay hada bilaabayso inay samayso meelaha ugu sareeya halkii laga badin lahaa karbaashida oo aakhirka lagu rido subagga maxaa yeelay ma hagaajin kartid kadib markii aad loo karbaashay.
Intee in le'eg ayey tahay in keega la burburiyo?
Caadi ahaan, socod baradka ma uusan haysan keeg badan (haddii ay jiraan) waqtiga ay mid yihiin. Marka doolshaha jajabku waa inuusan aad u weyneyn. Dadka qaarkiis xitaa waxay sameyaan wax yar oo koob ah halkii ay ka sameyn lahaayeen keeg jajab waana taas gabi ahaanba fiican!
Laakiin haddii aad qorsheyneyso sawir qaadis sidii aan u sameeyay dhalashadii koowaad ee Cesraa, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sameyso keeg 6 ″ ah. Weli waa wax aad u yar laakiin weyn oo ku filan inaad awood u yeelan doonto inaad hesho xoogaa yar oo ka mid ah burburka ka hor inta keega gebi ahaanba la dumin.
Runtii waxaan sameeyay laba 6 ″ keega. Mid Cesraa burburiyo iyo mid reerku cunayo burburka kadib. Haddii aad rabto inaad sameyso laba keeg, kaliya labanlaab raashinka hoos ku yaal adoo hagaajinaya 'servings' slider-ka ku yaal kaarka diyaarinta si aad u aqriso 24 halkii aad ka ahaan lahayd 12. Markaa waxaad heli doontaa dufan kugu filan laba keeg.
Haddii aadan rabin inaad ku sameysid keega labaad seddex 6 ″ digsiyada, waxaad isticmaali kartaa laba 8 ″ digsiyada. Ama waxaad u isticmaali kartaa kalkuleytariyaha kalkuleytariga kalkuleylka kor ku xusan si aad u ogaato inta dufanka keegga ah ee aad ugu baahan tahay wax badan oo digsi kasta oo qaab ah oo aad ka fekeri karto.
Sida loo sameeyo dillaac dillaac tallaabo-tallaabo ah
Tallaabada 1 - Samee dufanka keega. Waxaan isticmaalayaa keegga cadcad ee jilicsan ee jilicsan (fiiri qashinka hoose ee qoraalkan blog) laakiin waxaan u waafajiyay inay yeelato wax yar oo sonkor ah iyo ukumo dhan halkii ay ka ahaan lahayd ukun cad. Waan jeclahay keeggan maxaa yeelay waa mid aad u jilicsan oo u fudud socod baradka inuu wax cuno. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa midabaynta cuntada keegga haddii aad rabto keeg burburin midab leh, sida kuwan oo kale karinta keeg qaanso roobaadka .
Talo-siinin: Hubso in ukuntaada, caano-maalmeedka, iyo subagga ay dhammaantood yihiin heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran. Cunnooyinka qabow si fiican iskuma dhafan waxayna burburin doonaan keeggaaga.
Tallaabada 2: Dufanka u kala qaybi badh kuna dar isku darka budada kookaha nuskeed si aad uga dhigto shukulaatada halkii aad ka heli lahayd vanilj. Waxaan ku xiraa digsiyadayda keega goop laakiin waad adeegsankartaa wixii digsi kasto oo aad jeceshahay. Ku buuxi weelkaaga digaagga kala badh qashin.
Tallaabada 3: Dubi keega . Haddii aad haysato hal digsi oo keliya, waxaad ku ridi kartaa digaagga duugga ah qaboojiyaha illaa aad diyaar u tahay inaad dubto. Keegayadu waa la kariyaa marka aad taabatid dusha sare keegagga iyo keega ayaa dib u soo laaban doona. Tani waxay qaadan kartaa daqiiqado ka badan ama ka yar waqtiga ku qoran liiska cuntada oo aad ayey u kala duwanaan kartaa haddii aad isticmaaleyso weel cabbirkiisu ka duwan yahay.
Ka dib marka keegaaga la kariyo, u daa qaboojiyaha digsiga illaa uu digsiga yar ka diirran yahay (ma qabow ama way dhegi karaan). Keegga u rogo sariir qaboojiye ah oo u oggolow inay si buuxda u qaboojiyaan kahor dhaxanta. Aniga ayaa dhigey talaagada ilaa 30 daqiiqo si aan u dedejiyo howshan.
Waxa kale oo aad ku duubi kartaa keega duubka balaastigga ah waxaadna ku ridi kartaa qaboojiyaha habeenkii haddii aadan qorsheyneynin inaad qurxiso isla maalinta la dubo.
Tallaabada 4: Samee kareemkaaga la karbaashay . Waxaan isticmaalayaa kariimka la kariyey daryeelaha leh budada xasilinta ee Oetker laakiin waad ka boodi kartaa budada haddii aad rabto. Waxaan ku daray sharoobad yar oo shukulaatada kareemkeyga karbaashka ah kaas oo ka dhadhamiyay sida caanaha shukulaatada! Soooo dhadhan fiican!
Talo-siinin: Ha sameyn kareemkaaga la kariyey ilaa aad diyaar u ahaato inaad baraf ka dhigto keegaaga. Mar alla markii ay dejiso, ma noqon doono mid shiidan markale.
Hubso inaadan si xad dhaaf ah u karbaashin kareemkaaga karbaash ama wuxuu u noqon doonaa subag mana badbaadi karo. Waxaad rabtaa inaad joojiso isku-darka barta aad ku aragto meelaha ugu sarreeya oo sameysmaya laakiin weli ma ahan mid adag.
Tallaabada 5: Iskudir keegaaga. Haddii keegaadu ay leeyihiin qubbad, isticmaal mindi sireed looga saaro qubbada. Waxay ka dhigeysaa cunto fudud aad u shiddo dhammaan shaqadan adag ee aad qabanayso!
Iska yaree lakab kasta dhererka nuska-caqli-gal ah si aad u noqoto mid khafiifa (ikhtiyaar). Tan waxaa lagu magacaabaa jirdil keegaaga. Hubso in keegaagu uu qabow yahay si ay u fududahay in la maareeyo oo ha burburin intaad isdulsaarayso.
Lakabkaaga koowaad dhig dusha dusha keega ama dusha saxankaaga keega. Ku faafi lakab ka mid ah kareemkaada kareemka shukulaatada ah kuna jilci shabaqaaga. Iskuday inaad u dhigto sida ugu macquulsan ee aad kari karto iyo qiyaastii 1/4 ″
Dhig lakabka xiga ee keega dusha sare kuna sii wad hawshan illaa aad ka isticmaaleyso dhammaan lakabyada keegaaga.
Tallaabada 6: jaakad jajab ah. Waxaad marisaa lakab khafiif ah oo kareem ah oo la dubay keega oo dhan si aad ugu xirtid jajabka. Dhig keega oo dhan barafeeyaha 15 daqiiqo ka hor intaadan u dhaqaaqin tallaabada ugu dambeysa.
Tallaabada 7: Qurxin keegga.
Si aan u qurxiyo keegga jajaban, waxaan go'aansaday inaan isticmaalo bacda dhuumaha iyo caarada dhuumaha 1M. Ka bilow xagga hoose oo tuuji adigoo kor u socda.
Sidan ku samee dhammaan keega oo samee! Waxa kale oo aad samayn kartaa rosettes ama kaliya u isticmaali kartaa qalabkaaga spatula si aad u dhammeysato rustic. Gabi ahaanba adigaa iska leh! Waxaan si ula kac ah u ilaaliyay casharradan si fudud si qofkasta uu u samayn karo keeg jajaban!
Waxaad ka heli kartaa dahabkeyga taaj dahab ah template topper halkan. Kaliya kudaabac shaxanka kaararka dahabka ah iskuna dhaji dhammaadka AMA laba waad isku dhejin kartaa si aad taaj ugu samayso socod baradka! Waxaan ku daray xoogaa faux dhogorta hoosteeda ah sidaa darteed waxay umuuqataa wax taaj oo kale ah Meesha Waxyaabaha Duurjoogta ahi Jiraan.
Xusuusnow, waa inaadan waligaa kujirin wax walboo yaryar ah oo ku jira buskud burbursan maxaa yeelay waa halis ceegaaga.
Keeg qabow waa keega yucky. Hubso inaad keeggaaga kala soo baxdid qaboojiyaha subaxa kal-fadhiga doolshaha burbursan. Ugu yaraan dhowr saacadood ka hor si aad u siiso keega wakhti uu ku kululeeyo.
Ilmuhu badanaa ma yaqaaniin waxa lagu sameeyo keegga marka hore, ku dhiirrigeli inay dhadhamiyaan adoo gelinaya gacanta qabowga ama ku siinaya fartaada dhadhanka yar ee qabow fartaada si ay u bilaabaan.
Ilmo daallan oo lagu daray keeg la jajabiyey ma wanaagsana. Markii ay gabadhayda Avalon mid noqotay, waxaan ku khaldamay markaan samaynayay keeggeeda burburin markay xafladu dhamaatay markay daashay oo ayna doonayn inay qayb ka noqoto keegaas. Kubilaab xafladaha keega jajaban kadibna sameyso isbadal labis dhaqso leh kadib kadibna ku raaxeyso xaflada!
Lakabyo vanilj ah oo qoyan iyo keeg shukulaato ah oo lagu dhajiyay shukulaatada kareemka leh barafoobay qabow barafoobay! Cunnooyinka ugu fiican ee la burburiyo oo lagu daray casharro tallaabo-tallaabo ah. Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:7 daqiiqado Wadarta Waqtiga:22 daqiiqado Kalori:340kcal
▢1 ounce (28 g) budada kookaha
▢7 ounces (198 g) Daqiiqda Cake
▢5 ounces (142 g) sonkorta granulated
▢laba qaaddo shaaha budada dubista
▢1/4 qaaddo shaaha Fixiso
▢laba ounces (57 g) saliidda cuntada
▢5 ounces (142 g) caano subag heerkulka qolka ama in yar diiran
▢3 ounces (85 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢1 qaaddo shaaha vanilj
Shukulaatada La Karbaashay
▢12 ounces (340 g) kareemka karbaashka culus qabow
▢laba ounces (57 g) sonkorta budada ah
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo Sharoobada shukulaatada Hershey ama budada kookaha la miiray
▢1 xirmo Oetkers waxay xasuuqeen kareemka kareemka
▢Laba digsi 6'x2 'keeg
▢1M caarada dhuumaha iyo bacda dhuumaha
Isku dar budada kookaha biyaha kulul kuna qas ilaa intaad ka jilicsaneyso. Meel dhig si aad u qaboojiso.
Isku qas badh subagga saliidda khudradda oo dhinac iska dhig.
Ku dar ukun iyo vanilj caanaha haray ee haray iskuna dar si aad isugu darsato. Dhinac iska dhig.
Dhexdhiso baaqulika mashiinkaaga istaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka, ku dar burkaaga, sonkorta, milixda, budada dubista, iyo soodhaha isku dar 10 ilbidhiqsi si aad isugu darto.
Intaad isku dhex darin, ku dar subaggaaga jilicsan iskuna qas ilaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn.
Inta aad ku dhex qasmeyso si hoose, ku dar subagaaga caanaha / saliida isku dar oo isku qas ilaa 2 daqiiqo si aad u horumariso qaababka keega.
Xaaq weelka ka dibna sii wad isku darka hoose adigoo yareynaya qulqulka ku jira subagga caanaha / ukunta ilaa isku dhafan.
Kalaqee digaagga keega kala badh oo ku dar isku darka shukulaatada kala badh dufanka rootiga ee vanilj oo walaaq si aad isugu darto.
Jaakad laba 6'x2 'keeg ah oo keeg ah oo leh keeg goos ah ama sii daayo digsi kale oo la doorbido. Ku buuxi hal digsi isku darista vaniljka iyo kan kale shukulaatada.
Keega ku dub ilaa 350ºF illaa 25-30 daqiiqo ama ilaa keeggu soo laabanayo markii aad taabatid dusha sare.
Keegaaga ha ku qaboojiso weelka ilaa ay si dhib yar u kululaanayaan taabashada laakiin aan qabow ahayn.
keegaaga u rogo sariir qaboojiye si aad u qaboojiso inta harsan. Waxaan keegayaga dhigay qaboojiyaha muddo 30 daqiiqo ah (sariirta qaboojinta) si ay markaas u sii qaboojiyaan ayna u fududaan karaan la qabashadooda inta keega la is dulsaarayo. Fiiri fiidiyowgayga kor ku xusan si aad u aragto sida laysugu qurxiyo loona qurxiyo.
Isku dar kareemkaaga culus iyo sonkorta budada ah, vaniljiga iyo xasiliyaha (ikhtiyaar) weelka saxankaaga istaagga leh lifaaqa ku dheji.
Isku qas dhexdhexaad illaa aad ka bilowdo inaad aragto qaab jilicsan oo jilicsan.
Kudar sharoobadaada shukulaatada ah iskuna qas ilaa intaad iskudarayso. Ha ku dhaafin isku darka. Kareemka la kariyay waa inuu hayaa qaabkiisa laakiin wali waa jilicsan yahay. Way sii socon doontaa inay karbaasho oo ay xasillooni yeelato inta aad keega barafaynayso.
Hubso in ukuntaada, subagga, iyo subagga ay dhammaantood yihiin heerkulka qolka ka hor intaadan sameyn keegaaga ama keeggu si sax ah iskuma dhafan doono.
Qabooji keegaga kahor intaadan is dulsaarin iyo dhaxan
Ha ku dul wareegin kareemkaaga la kariyay si uu u ahaado mid wanaagsan oo siman
Waad ka tagi kartaa shukulaatada haddii aad rabto in keegaagu uu noqdo vanilj ama waad laba jibaari kartaa shukulaatada haddii aad rabto in dhammaan waxyaabaha ku jira keega ay noqdaan shukulaatada halkii ay ka ahaan lahayd vanilj.
Haddii aad ku sugan tahay Boqortooyada Midowday ka raadso Shipton mills keega jilicsan iyo daqiiqda cajiinka ah ama daqiiqda leh borotiin heerkiisu yahay 9% ama ka yar. Sameynta budada galleyda iyo dhagarta AP daqiiqda uma shaqeyn doonaan keeggan, waxaa si gaar ah loogu qaabeeyey habka kareemada beddelka ah si loogu isticmaalo burka keega.
U adeegida:1koob|Kalori:340kcal(17%)|Kaarboohaydraytyada:32g(kow iyo toban%)|Protein:5g(10%)|Dufan:2. 3g(35%)|Dufan Dufan:shan iyo tobang(75%)|Kalastarol:86mg(29%)|Sodium:109mg(5%)|Kaliumperyamper:169mg(5%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:17g(19%)|Vitamin A:658IU(13%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:73mg(7%)|Bir:1mg(6%)
karinta buskudka sonkorta oo aan faafin
hi ratio oo gaabinaysa meesha laga iibsado
sida loo sameeyo fondant daboolida keega
sida loo xidh -xidho keega afar -jibbaaran
sida loo sameeyo dukaanka iibsaday dhadhan isku darka cake sida roodhida